यती सुन्दर संसार थियो तर श्रीमानले नै ‘सखाप’ पारिदिए…. – Ramailo Sandesh
यती सुन्दर संसार थियो तर श्रीमानले नै ‘सखाप’ पारिदिए….
काठमाडौं । सोमबार काठमाडौंको बल्खु पुल नजिकै सुकुम्बासी बस्तीमा श व फे’ला परेकी महिलाको श्रीमान्‌ले ज्या’ न लि’ एको खु’लेको छ । सोमबार साँज काठमाडौंको बल्खु पुल नजिकैको सुकुम्बासी बस्तीमा बो’रामा पो’ को पा’रेको अवस्थामा ३३ वर्षीया सन्तोषी श्रेष्ठ सापकोटाको श व फेला परेको थियो।
घर पछाडिको पे टीमा राखिएको बो’रा देखेपछि स्थानीय तेज बहादुर सापकोटाले प्रहरीमा खबर गरेका थिए । प्रहरी पुगेर बोरा खोली हेर्दा तेजबहादुरकै भाउजु सन्तोषीको श व फेला परेको थियो । प्रहरी घरमा पुगेर श’वको मु’चुल्का गर्न थाल्दा सन्तोषीका पति सन्तोष सापकोटा भने त्यहाँबाट भा ‘गिस’केका थिए । भा’गेका सन्तोषलाइ प्रहरीले प’क्राउ गरिसकेको छ ।
सोमबार सन्तोषीको श’व फेला परेपछि भा’गेका सन्तोषलाई काठमाडौंको कुलेश्वरबाट प’क्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । परिवारका सदस्यले प्रहरीलाई बताएअनुसार सन्तोष र सन्तोषीको बीचमा पटक पटक झ’ गडा भइरहन्थ्यो । पतिसँग झ’ गडा भएका कारण सन्तोषी जोरपाटीस्थित माइतीमा बस्थिन् । पतिसँग उनले डिभोर्स मागेकी थिइन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले भने, ‘ यो घ टना श्रीमान् ले नै घटा एका हुन् ।’ प्रहरीका अनुसार सोमबार दिउँसो करिब १ देखि २ बजेको बीचमा सन्तोषीको ज्या ‘न लि’एको देखिएको छ ।
हा’र्डवेयर पसलमा काम गर्ने सन्तोषका भाइ तेजबहादुर साँझ मात्रै घर फर्किएका थिए । घर आउँदा घर पछाडिको पेटीमा राखिएको बोरा देखेपछि उनले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । अनुसन्धानमा सं’लग्न प्रहरीका अधिकारीका अनुसार बे’डरु’म’मा ज्या’ न लि ’एपछि सन्तोषीको प्या ’क ग’रेर घर पछाडी पे’टीमा रा’खिएको देखिन्छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानबाट सन्तोषली श्रीमती सन्तोषीको ज्या न लि एपछि उनीसँग भएका गहना तथा नगदसमेत नि’का’लेर लगी फ रार भएका थिए । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकारीले भने ।